निर्मला काण्ड सेलाएको छैन, नेपाली सेनाका जवानले गरे अर्को जघन्य अपराध ! - निर्मला काण्ड सेलाएको छैन, नेपाली सेनाका जवानले गरे अर्को जघन्य अपराध !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २6 पुष, 02:05:21 PM
टोल छिमेक तथा नजिकका आफन्तहरुका अनुसार मृतक सुष्माले बिहे भएदेखि नै आफना श्रीमान तथा सासु–ससुराबाट चरम यातना सहदै आइरहेकी थिइन् । राती उनका श्रीमान मोहन बोहाेराले आफनी श्रीमतीलाई दाउरालगायत अन्य हतियार प्रयोग गरी तथा यौनाङ्गामा विभिन्न खालका बस्तुहरु घुसाई चरम यातना दिई निर्ममतापुर्वक हत्या गरे ।
♦ कुसुम विश्वकर्मा ♦
तपाईको घरमा पक्कै पनि आमा, दिदी, बहिनी हुनुहुन्छ ? अनि हामीले कहिल्यै ती आमा, दिदीबहिनी वा श्रीमती कत्तिको सुरक्षित छन् भन्ने सोचेका छौं ? यदि सोचेको भए तपाईलाई धन्यवाद ! कमसेकम तपाई परिवर्तनको संवाह बन्नु भएछ । तर अब हामीले तिनै महिलाका बारेमा सोच्नु पर्ने र सुरक्षित गर्नुपर्ने भएको छ ।
हामी नेपाली अनि हाम्राे समाज खै कतातिर जादै छ, दिनदिनै हत्याहिंसाका घटना दोहोरी रहेका हुन्छन् । कहीँ हत्या, कहीँ हिंसा, कहीँ बलात्कार ? कहिलेसम्म यो सब ?
समाजमा हुने गरेका यी र यस्तै घटनाका कारण तपाई हाम्रा दिदी, बहिनी, आमा, भाउजु, काकी, माइजु अनि तपाईकी श्रीमती साँच्चै कै सुरक्षित छन् त ?
साउन १० गते कंञ्चनपुरमा घटेको निर्मला पन्त हत्याप्रकरणले न्याय नपाउदै समाजमा धेरै घटनाहरु दिनदिनै घटिरहेका छन् । यस्तै घटना बर्दियाको सदरमुकाम गुलरियामा पनि घटेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाले दिएको जानकारी अनुसार श्रीमानले आफनै श्रीमतीको हत्या गरेका हुन् ।
गुलरिया नगरपालिका वडा नं ५ निवासी २७ वर्षीया सुष्मा कुँवर बोहराको सोमबार राती अन्दाजी साढे ११ बजेको समयमा हत्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यलय बर्दियाका एसपी सुरेन्द्र मैनालीले नेपालबहसलाई जानकारी दिए ।
आफ्नो घरभित्र मृत भेटिएकी २७ वर्षीया सुष्मा कुँवरको हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै मृतकका श्रीमान ३५ वर्षीय मोहन बोहाेरालाई प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ ।
मृतक कुवरका श्रीमान मोहन बोहाेरा नेपाली सेनामा कार्यरत रहेका छन् । यसैबीच सो घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न बर्दियाका अधिकारकर्मीले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै जोडदार माग गरेका छन् । टोल छिमेकका तथा नजिकका आफन्तहरुका अनुसार मृतक सुष्माले बिहे भएदेखि नै आफना श्रीमान तथा सासु–ससुराबाट चरम यातना सहदै आइरहेकी थिइन् । उनका श्रीमान मोहन बोहाेराले श्रीमतीलाई दाउरा लगायत अन्य हतियार प्रयोग गरी तथा यौनाङ्गामा विभिन्न खालका बस्तुहरु घुसाई चरम यातना दिई निर्ममतापुर्वक हत्या गरेको जारी विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
हत्याको विरोधमा जिल्लास्थित महिला सञ्जाल र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले घटना भएको भोलिपल्ट नै मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर हत्याको निश्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका हुन् ।
यो त भर्खरमात्र घटना भयो । समाजमा यस्ता खालका घटना दैनिक जसो सार्वजनिक भएका हुन्छन् । बर्दिया केही बर्ष अघिपनि एउटा अबिवाहित युवतीको जिउदै जलाएर हत्या भएको थियो । समाजमा यस्ता घटनाले के महिला अब परिवारमा सुरक्षित छन् त ? जब आफ्नो घरभित्र नै महिला सुरक्षित छैनन् भने सोच्नुस् त बाहिर महिला कत्तिको सुरक्षित होलान् ?
सँगै मर्ने अनि संगै बाँच्ने कसम खाएर करिब ६ बर्ष अघि बैवाहिक सम्बन्धमा बाधिएकी सुष्माले के आफ्नो श्रीमानले यसरी मार्ला भन्ने सोचेकी थिइन होली त ? घटनालाई नजिकबाट हेरेकी गुलरिया नगरपालिका वडा नं ५ कि वडा अध्यक्ष सावित्री गौतम भन्छिन्, सुष्मा पहिलेदेखि नै पिडित थिइन्, हामीले छिमेकीमा बुझेका थियौ उनी कहिलेपनि खुलेर बोल्न चाहिनन्, उनलाई श्रीमान मात्र होइन् सासु र ससुराले पनि यातना दिने गरेका थिए ।
सोमबार साझ सुष्मा २ बर्षको छोरा र अर्को ५ बर्षको छोरालाई खाना ख्वाएर सुताइ सकेकी थिइन् । प्रहरीले नेपाल बहसलाई दिएको जानकारी अनुसार सोही दिन राती सुष्माको श्रीमान खबर नै नगरी एक्कासी राती बर्दियास्िथत आफ्नो घरमा आएर हत्या गरेर भागेका हुन् ।
घटनास्थलबाट मरे नि भन्ने मात्र आवाज आएपनि छिमेकीले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपीसहितको टोली घटनास्थलमा राती सवा १२ बजे नै पुगेको एसपी मैनालीले बताएका छन् । प्रहरीको टोली घटनास्थल पुग्दा मृतक सुष्माका श्रीमान दुई छोराहरुलाई अर्को कोठामा राखेर बाहिरबाट कोठा बन्द गरी अर्को कोठामा श्रीमतीलाई विभत्स तरिकाले हत्यागरी भित्रैबाट कोठा बन्द गरी छतबाटै भागेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको एसपी मैनालीले बताएका छन् ।
सामाजिक तथा सांस्कृतिक हिंसाका रूपमा बालविवाह, बोक्सीको आरोप, सुत्केरी तथा रजस्वलाको समययमा गरिने व्यवहार, छाउपडी रूपमा महिलाहरू पीडित छन् । काम गर्ने स्थान, अध्ययन अध्यापन गर्ने स्थान, सार्वजनिक यातायात आदिमा जबरजस्ती संवेदनशील अङ्गमा छुने, फोटो, साइबर क्राइम, मल्टी पार्टनर राख्ने प्रवृत्ति, फिल्म खिच्ने जस्ता कार्यहरू यौन हिंसाका रूपहरू हुन् । भर्खरै त्रिवि समाजशास्त्रका दुई छात्राहरूले आफूलाई प्रध्यापकले गरेको यौन दुर्व्यवहारका विषयमा लेखे । लैङ्गिकता पढाइ हुने ठाउँमा नै यस्तो हिंसाको शिकार बन्न महिलाहरू बाध्य छन् । दाइजो नल्याएको निहुमा तराईमा प्रत्येक वर्ष महिलालाई जिउँदै जलाउने, माइतीको आर्थिकस्तर न्यून रहेको कारण दिन प्रतिदिन महिलालाई प्रताडित तुल्याउने खालका आर्थिक हिंसा गरिन्छ ।
घटना सोमबार रातीको हो । घटनाको खबर पाउनासाथ प्रहरीले चारैतिर सिल गरेको हो । अनि गस्तीलाई पनि कडा गरेको थियो । मंगलबार बिहान नै प्रहरीले गुलरिया नगरपालिकाको खैरापुरबाट मृतकका श्रीमानलाई पक्राउ गरेको बताएको छ । अहिले घटनाको अनुसन्धान जारी छ ।
नेपालमा महिलाको स्थिति अन्य देशको इतिहासभन्दा फरक छ । सन् १९९० को दशकको सुरुवातमा केही अन्य देशजस्तै नेपालमा पनि महिलाहरू जीवनको लगभग हरेक समयमा पुरुषको अधिनमा थिए । समाज परिवर्तनसँगै विकसित देशमा विस्तारै महिला हिंसा न्यूनिकरण हुँदै गयो । तर नेपालजस्तै अल्पविकसित देशमा भने अरू देशमा जस्तो सुधार हुन सकेको छैन ।
महिला हिंसा जसलाई लिङ्गमा आधारित हिंसा तथा यौनमा आधारित हिंसा पनि भनिन्छ । महिला भएकै कारण मानवअधिकारको उपभोगमा गरिने विभेद, शारिरिक, मानसिक र संवेगात्मक रूपमा दिइने पीडा तथा यातना र अन्य कुनैपनि कारणबाट महिलाको आत्मसम्मानमा पुर्याइने सबै किसिमको आघातलाई महिला हिंसाका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।
लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७१ अनुसार लैङ्गिक हिंसा भन्नाले ‘सार्वजनिक वा निजी जीवनमा, लैङ्गिक आधारमा कसैप्रति शारिरिक, यौनजन्य, वा मानसिक क्षति वा पीडा पुर्याउने कार्यलाई सम्झिनुपर्छ र सो शब्दले लैङ्गिक आधारमा हुने वा हुनसक्ने कुनैपनि प्रकारको अपमानजन्य, पिडाजन्य वा धम्कीपूर्ण व्यवहार, दबाब, करकाप वा स्वेच्छाकारी रूपमा महिलालाई स्वतन्त्रताको उपभोगबाट वञ्चित गर्ने कार्यसमेतलाई जनाउछ ।’
नेपालको सन्दर्भमा कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाहरू आजसम्मपनि विभिन्न हिंसाको शिकार भइरहेका छन् । समाजमा रहेको पितृसत्तात्मक सोच, लैङ्गिक असमानता, अन्धविश्वास, अशिक्षा, यौन असन्तोष र दाइजो, नीति निर्माणको तहमा महिलाको प्रतिनिधित्वको कमीजस्ता विषय महिला हिंसा हुने प्रमुख कारण हुन् ।
महिला हिंसाअन्तर्गत अधिकांश महिला आफ्नै श्रीमान तथा परिवारका अन्य सदस्यबाट पीडित छन् । विश्व बैङ्कको एक अध्ययनका अनुसार नेपाल विश्वमा आत्मीय साथी–जीवन साथीबाट हुने शारिरिक हिंसा अत्याधिक व्याप्त भएको १५औं देशमध्ये १४ स्थानमा पर्छ ।
हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा हिंसाका रूपहरू फरकफरक छन् । शारिरिक रूपमा कुटपिट, श्रीमानले रक्सी खाएर यातना दिनु, जबरजस्ती गर्भपतन गर्न लगाउनु, छोरा नजन्माएको कारण श्रीमानले बहुबिवाह गर्नु जस्ता शारिरिक हिंसा व्याप्त नै छन् ।
सामाजिक तथा सांस्कृतिक हिंसाका रूपमा बालविवाह, बोक्सीको आरोप, सुत्केरी तथा रजस्वलाको समयमा गरिने व्यवहार, छाउपडी रूपमा महिलाहरू पीडित छन् ।
काम गर्ने स्थान, अध्ययन अध्यापन गर्ने स्थान, सार्वजनिक यातायात आदिमा जबरजस्ती संवेदनशील अङ्गमा छुने, फोटो, साइबर क्राइम, मल्टी पार्टनर राख्ने प्रवृत्ति, फिल्म खिच्ने जस्ता कार्यहरू यौन हिंसाका रूपहरू हुन् । भर्खरै त्रिवि समाजशास्त्रका दुई छात्राहरूले आफूलाई प्रध्यापकले गरेको यौन दुव्र्यवहारका विषयमा लेखे । लैङ्गिकता पढाइ हुने ठाउँमा नै यस्तो हिंसाको शिकार बन्न महिलाहरू बाध्य छन् ।
दाइजो नल्याएको निहुमा तराईमा प्रत्येक वर्ष महिलालाई जिउँदै जलाउने, माइतीको आर्थिक स्तर न्यून रहेको कारण दिन प्रतिदिन महिलालाई प्रताडित तुल्याउने खालका आर्थिक हिंसा गरिन्छ ।
लोग्नेले कुटपिट वा हिंसा गर्याे भनेर प्रहरीमा उजुरी गर्न जाने महिलाले बाटो खर्च त्यही लोग्नेको गोजीबाट झिक्नुपर्ने बाध्यता अहिले पनि जिउका तिउ छन् । विवाद मिलाएर घर फकेर्र आएपछि पुनः त्यहि घरमा बस्नु पर्ने भएपछि झन् गाह्रो हुने छदैछ ।
देशमा २०६२/६३ पछि सङ्घीयता, समावेशिता, गणतन्त्र जस्ता केही महत्वपूर्ण पक्षमा परिमार्जन भयो । तर महिलामाथि हुने हिंसा हत्याका समाचार लेखि रहदा लाग्छ यो परिमार्जनले समाजमा खासै असर पार्न सकेको छैनन ?
महिला हिंसाको प्रमुख कारण सामाजिकीकरण, न्याय व्यवस्था र सामाजिक संरचना हो । आधा आकाश मानिने नारीको ठूलो हिस्सा पुरुषको कारण थिचोमिचो र उत्पीडन सहन बाध्य छ । हाम्रो समाजमा जोसँग बढी शक्ति हुन्छ, उसले नै हिंसा गर्छ र जोसग शक्ति हुँदैन उसले हिंसा सहने गर्छ ।”
नेपाल जनसख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०१६ अनुसार नेपालमा १० मा ३ महिला र २३ प्रतिशत पुरुषहरूले श्रीमतीले खाना डढाएमा, श्रीमानसँग तर्क गरेमा, बच्चालाई वास्ता नगरेमा, श्रीमानसँग यौनसम्पर्क गर्न नमानेमा श्रीमतीलाई पिट्नु ठीक हो भन्ने सोचाइ राखेको पाइएको छ । २४ प्रतिशत महिला र १९ प्रतिशत पुरुषले श्रीमतीले बच्चालाई वास्ता नगरेमा श्रीमानले श्रीमती पिट्नु ठीक हो भन्ने सोचाइमा सहमति जनाएका छन् ।
नेपालमा ५ महिलामध्ये १ भन्दा बढी महिलाहरूले १५ वर्षको उमेरमा नै शारिरिक हिंसाको अनुभव गरिसकेको बताएका छन् । यस्तै ७ प्रतिशत महिलालो आफ्नोे जीवन कालको कुनै न कुनै समयमा यौनजन्य हिंसाको अनुभव गरेको बताएका छन् । ८० प्रतिशत महिलाले श्रीमानबाट नै यौनजन्य हिंसा हुने गरेको बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिला आयोगका अनुसार विश्वका १४४ देशमध्ये लैङ्गिक असमानता सूचकाङ्कमा नेपाल ११५ स्थानमा रहेको छ । लैङ्गिक भिन्नतामा नेपाल ११० स्थानमा रहेको छ ।
शारीरिक वा यौन हिंसा भोगेका महिलाहरूमध्ये ५ मा १ ले सो हिंसा रोक्न अरूबाट सहयोग लिनका लागि खोजी गरेका रहेछन् । दुई तिहाई महिलाले कसैबाट सहयोगका लागि कहिल्यै खोजी नगरेको राष्ट्रिय महिला आयोगले जानकारी दिएको छ ।
आयोगका अनुसार नोभेम्बर २१, २०१७ देखि ३१ अगस्ट २०१८ सम्म गरेको सर्वेक्षणमा भावनात्मक हिंसा ३६ प्रतिशत, यौन हिंसा १० प्रतिशत, आर्थिक हिंसा ३० प्रतिशत, शारीरिक हिंसा २४ प्रतिशत हुने गरेका नतिजा सार्वजनिक गरिएको छ ।
नेपालमा प्रत्येक वर्ष महिला हिंसाविरुद्धको दिवस मनाइन्छ । प्रत्येक वर्ष हिंसाविरुद्ध सोह्र दिनको अभियान चल्छ । महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि सन् १९७९ लाई हामीले अनुमोदन गरिसकेका छौ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् १९९९ को महासभाले नोभेम्बर २५ लाई महिला हिंसाविरुद्धको दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गर्याे । यस वर्ष पनि सोही अभियानलाई नितरन्तरता दिदै ओरेन्ज द वल्र्ड ३ हियर मिटु नारासहित दिवस मनाइयो । दिवसकै अवसमा अझै धेरै घटना घटे तर कुनै घटनाले न्याय पाएन् । नत निर्मलाले न्याय पाइन नत निर्मला जस्ता अरु निर्मलाले न्याय पाए । दिवस दिवसमै सिमित भए ।
यस्तै, चौधौँ योजनाको अन्त्यमा लैङ्गिक सशक्तीकरण सूचकाङ्क ०.५६ बाट ०.५८ पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैगरी सरकारद्वारा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट २०७२/०७३ मा २३.३ प्रतिशत पुगेको छ र संसदमा महिला सहभागिता २९.९ प्रतिशत पुगेको छ ।
घरेलु हिंसा कसुर सजाय ऐन, वि.सं. २०६६ मा घरेलु हिंसा गर्न नहुने र कसैले गरेको पाइएमा कानुन बमोजिम सजायको व्यवस्था गरिएको छ । पीडितलाई क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यीबाहेक पनि महिला हिंसा विरुद्धका थुप्रै ऐन नियम रहेका छन् ।
समाजमा यसरी घट्ने घटनाको कुरा गरी रहदा लाग्छ प्रश्न खडा हुन्छ, के साच्चै महिला सुरक्षित छन् त ? अनि परिवारमै सुरक्षित भएको महसुस गरेका छन् त ? त्यसैले महिलामाथि हुने यी नै र यस्ता घटना न्यूनिकरण गर्न आजै देखि लागौ परिवर्तनको संवाहक बनौं तपार्इंं हाम्रा आमा दिदी बहिनीलाई बचाऔं । होइन भने बर्दियाकी सुष्माले जस्तै अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्छ ।
२०७५, २6 पुष, 02:05:21 PM